कस्ले गर्यो एनआइसी एसिया बैंकको ४६ करोड ह्याक ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
कस्ले गर्यो एनआइसी एसिया बैंकको ४६ करोड ह्याक ?
एनआइसी एसिया बैंकको साढे ४६ करोड रुपैयाँ ह्याक गर्ने उत्तर कोरियाली ‘लजारुस ग्रुप’ भएको खुलेको छ । ३ कात्तिक ०७४ मा एनआइसीको ४६ करोड ५६ लाख ५० हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ ‘स्विफ्ट ह्याक’ गरी लजारुस ग्रुपले विदेशका विभिन्न बैंकमा पु¥याएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको हो ।
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी बुद्धिराज गुरुङले बैंक ह्याक गरी विदेशी बैंकमा रकम लैजाने उत्तर कोरियाली ह्याकर रहेको खुलेको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
उनले भने, ‘एनआइसी एसिया बैंक ह्याक गरी साढे ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी बैंक लगिएको र त्यसमध्ये झन्डै सात करोड रुपैयाँ ह्याकरको हातमा परिसकेको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान ग¥यो ।
कसरी फिर्ता गर्न सकियो धेरै पैसा ?
गत ३ कात्तिक तिहारको बिदाको दिन ह्याक भएको केही घन्टाभित्रै बैंकमा रहेको साढे ४६ करोड रुपैयाँ लन्डन, जर्मन, चीन, हङकङ, टर्की, जापान र अमेरिकाका विभिन्न बैंकमा ट्रान्सफर गरिएको थियो । ट्रान्सफर गरिएको रकम भुक्तानीका लागि ह्याकरले ३९ वटा अर्डर दिइसकेको थियो । त्यसमध्ये ३१ वटा अर्डर भने सफल हुने चरणमा थियो । पछि बैंकले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै २३ वटा अर्डर रोकेपछि रकम भुक्तानी हुन सकेन । त्यस बाहेकको ४ वटा अर्डरबाट भने भुक्तानी भएको थियो ।
बैंक ह्याक गरी लगिएको रकम विभिन्न मुलुकका १३ वटा बैंक खाताबाट रकम झिक्ने प्रयास गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार लन्डनको लोयड्स बैंकस्थित २३ वर्षीय इमिलियानो भिल्लाकसिओ र सोही बैंकमा रहेका २१ वर्षीय अलिक्जा मिकिलेविजको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार टर्कीको एके बैंक, जापानको बैंक अफ टोकियो मित्सुबिसीस्थित दुईवटा खाता, चीनको बैंक अफ इस्ट एसियास्थित दुईवटा खाता, अमेरिकाको बैंक अफ अमेरिका र अमेरिकाकै पिएनसी बैंक पिट्सबर्गमा पनि ह्याकरले उक्त रकम पु¥याएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार ‘लजारुस ग्रुप’ अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर समूह हो । यसलाई ‘हिडेन कोब्रा’ पनि भनिन्छ । यो ग्रुपले सन ०१६ मा बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक ह्याक गरी ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संसारका विभिन्न बैंकमा सफलतासाथ ट्रान्सफर गरेको थियो । त्यसमध्ये ८ अर्ब १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन ह्याकर ग्रुप सफल भएको थियो ।
सोही ग्रुपले इक्वेडरको बैंकको डेल अस्ट्रोबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, भियतनामस्थित तेइफोङ बैंकबाट १० करोड रुपैयाँ र ताइवानस्थित इस्ट इन्टरनेसनल बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ लैजान सफल भएको थियो ।
ह्याक गरी बैंकलाई अर्बौँ रुपैयाँ क्षति पु¥याउने ‘लजारुस ग्रुप’का कुनै पनि सदस्य अहिलेसम्म पक्राउ भने परेका छैनन । उनीहरूको पहिचान समेत हुन सकेको छैन ।